American Airlines hanao codeshare miaraka amin'ny IndiGo amin'ny sidina India
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » American Airlines hanao codeshare miaraka amin'ny IndiGo amin'ny sidina India
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
American Airlines dia manangana serivisy vaovao eo anelanelan'ny New York City sy ny renivohitr'i India Delhi amin'ny volana ambony, ary eo anelanelan'ny Seattle, WA sy ny tanànan'i Bengaluru amin'ny fiandohan'ny taona manaraka.
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra ao India dia nanambara fifanarahana codeshare niaraka tamin'ny American Airlines amin'ny zotra anatiny.
Ny fizarana kaody dia ahafahan'ny orinasam-pivarotana hivarotra seza amin'ny sidina ampiasain'ny mpiara-miasa aminy, hahafahany manidina mpandeha any amin'ny toerana tsy tompoiny.
American Airlines dia manangana serivisy vaovao eo anelanelan'ny New York sy ny renivohitra India, Delhi amin'ny volana ho avy.
Raha eo am-piomanana ny hanao serivisy vaovao eo anelanelan'ny USA sy India ny American Airlines, dia nanambara ny fifanarahana fizarana kaody miaraka amin'ny indostrialy lehibe indrindra India IndiGo.
Ny fifanarahana codeshare, nambara androany, dia antenaina hanomboka amin'ny volana oktobra, ary ho hita eo American Airlines'kaody amin'ny làlana 29 an'ny lalam-pirenena India an'ny India.
Ny fifanarahana fizarana kaody dia ahafahan'ireo mpitatitra fiaramanidina mivarotra seza amin'ny sidina ampiasain'ny zotram-piaramanidina mpiara-miasa aminy, hahafahan'izy ireo mampidina ny mpandeha any amin'ny toerana tsy alehany.
Ny fifanarahana fizarana kaody miaraka Indigo, izay no kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra any India misy mpandeha entina, ary an'ny InterGlobe Aviation, dia mitaky fankatoavana avy amin'ny manampahefana amerikana sy indianina, hoy ny American Airlines.
American Airlines, Inc. dia kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana manana foibe any Fort Worth, Texas, ao anatin'ny metroplex Dallas – Fort Worth. Io no kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra eran-tany raha refesina amin'ny haben'ny fiaramanidina, mpandeha voatondro entina, ary kilometatra mpandeha amin'ny fidiram-bola.
Indigo dia kaompaniam-piaramanidina karàna ambany foibe any Gurgaon, Haryana, India. Io no kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra any India amin'ny alàlan'ny mpandeha entina sy ny haben'ny andian-tsambo, miaraka amin'ny anjaran'ny tsena anatiny 59.24% hatramin'ny volana aogositra 2020.